Ahịa nke Galaxy Z tụgharịa na-egosi na ahịa dị njikere maka mpịachi smartphones | Gam akporosis
Samsung weputara na February nke abụọ nke ụlọ ọrụ Korea na ụwa nke mpịachi ekwentị, mgbe mbido na 2019 nke Galaxy Fold, ọnụahịa nke a manyere igbu oge ịmalite ya na ahịa ruo mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji ikpeazụ nke afọ na tinye ihe dịka puku 500.000 mgbasa n'ụwa niile.
The Galaxy Z Flip bụ nzọ dị iche iche karịa ihe Galaxy Fold na-enye anyị, ọ bụ ezie ha abụọ nwere a mpịachi ihuenyo. Coronavirus emeela ka ọnụ ọgụgụ zuru ezu na ahịa n'etiti ọtụtụ ndị nrụpụta, gụnyere Galaxy S20, ihe atụ dị n'okpuru ọkwa mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ nwere, ihe dị iche na Z Flip
E webatara Galaxy Z Flip na mbido Febụwarị ruo obere otu mba na February 14 maka euro 1.500 ($ 1.399 na United States). Dabere na ụmụ okorobịa si SamMobile, bụ ndị nwere ohere ị nweta akụkọ nke EconoTimes bipụtara, n'ime ọnwa Machị, Samsung rere 230.000 Galaxy Z Flip, ọnụ ọgụgụ ndị chere mmụba nke 56,1% ma e jiri ya tụnyere ọnwa nke mmalite ya. Ọ bụrụ na ndị coronavirus ama kpọnwụrụ fọrọ ụwa niile, ọ bụ karịa kwesiri na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ ga-abụ nnọọ elu.
Onu ogugu a apughi iji ya tụnyere ahia nke onu ogugu ndi ozo di ala karie ha agaghi enwe mmetuta di ukwuu na onu ahia ahia nke ulo oru Korea, ma o gosiputara accolade nke a ụdị mpịachi ọnụ, karịsịa nke ụdị shei, na-egosi na ahịa ahụ etolitela iji mee ha ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Ihe ọzọ bụ ụgwọ. Ọgbọ mbụ a dị maka euro 1.500, mana ụdị afọ ọzọ, ọ nwere ike ịbụ dị ọnụ ala karịa, na nke a ga-aga n'ihu na-eme ka ọnụ ahịa nke nrụpụta ihe nrụpụta na-ebelata, yabụ ọ ga-abụwanye ihe a na-ahụkarị ụdị ọdụ a n'okporo ámá.
Naanị ọnụahịa nke taa nwere ike iguzo na Galaxy Z Flip bụ Motorola RAZR, ọnụ nke dị ọtụtụ usoro n'okpuru Samsung, ọbụghị naanị na akụrụngwa dị mma yana imecha, kamakwa na ike, arụmọrụ yana ọnụahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Galaxy Z tụgharịa ahịa na-egosi ahịa dị njikere maka mpịachi smartphones